अब कम्प्युटरले पढ्नेछ मान्छेको मनको कुरा - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
अब कम्प्युटरले पढ्नेछ मान्छेको मनको कुरा
Published On : २९ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:०६
काठमाडौं । वैज्ञानिकहरुले एउटा यस्तो कम्प्युटर तयार पार्दैछन् जसले मान्छेको मनको कुरा पढ्न सक्नेछ । तपाइँले नबोलेको वा मनमनै सोँचेको कुरा पनि कम्प्युटरले सुन्न सक्नेछ ।
यस कम्प्युटर प्रणालीमा रहेको विशेष प्रविधिले मानिसको अनुहारको भाव तथा मनमा खेलाइएका शव्दहरुको प्रतिक्रिया बुझेर व्यक्तिले नबोलेका शव्दहरु समेत बोलिदिन सक्दछ ।
कसरी काम गर्दछ यो डिभाइसले ?
श्ोधकर्ताहरुका अनुसार हालसम्म प्राप्त परिणाम निकै उत्साहबर्धक रहेको छ र नतिजा निकै उत्कृष्ट रहेको छ । भविष्यमा मानिसको मनका कुारकानीलाई पूरै पढ्नसक्ने कम्प्युटर तयार गर्ने लक्ष्यमा सफलता हात पर्ने विश्वास उनीहरुको छ ।